Fialantsasatra any Huanchaco, amorontsirak'i Peru | Vaovao momba ny dia
Fialantsasatra any Huanchaco, amorontsirak'i Peroa
Omaly vao avy nody ny sakaiza frantsay iray avy nanao fitsidihana telo volana tany Amerika atsimo. Nitsidika an'i Kolombia, Ekoatera, Però, Bolivia ary Arzantina izy ary rehefa nanontaniana momba ny iray amin'ireo toerana tiany indrindra izy dia namaly tsy nihambahamba: Huanchaco.
Huanchacho dia ny morontsirak'i Peroa ary toeram-pialan-tsasatra fanta-daza izy io. Raha tianao ny Surf, mihaona amin'ny olona manerana an'izao tontolo izao sy ny fiainana amoron-dranomasina dia miandry anao i Huanchacho.
2 Ahoana ny fomba hahatongavana any Huanchaco
3 Inona no hatao any Huanchaco
4 Fitsangatsanganana avy any Huanchaco
Izany dia tanàna amoron-tsiraka akaikin'ny tanànan'i Trujillo, cradle of ceviche ary ankehitriny ampahany amin'ny zotram-pizahantany fantatra amin'ny hoe Moche Route. La ratsy tarehy Kolontsaina iray manan-danja tany Pérou taloha izy io ary ny fitsangatsanganana dia mitarika ireo liana amin'ny alàlan'ny làlan'ny tranokala izay anisan'ny fanjakan'ny Chimú sy Mochica, any avaratry ny firenena, tombanana ho 700 kilometatra miala an'i Lima.
Ny morontsiraka Pasifika Peroviana dia malaza eo amin'ny tontolon'ny onja fitetezam-paritra ary i Huanchacho dia nahavita tamin'ny taona 2013 ho ekena amin'ny sehatra iraisam-pirenena Tahirin'ny Surf manerantany. Tsy dia maro ny morontsiraka eto amin'ity planeta ity izay manana anaram-boninahitra io, dimy fotsiny ary ity morontsiraka Peroviana kely ity dia efa ao anatin'ny vondrona voafantina, ka… halahelo azy ve ianao?
Azonao atao ny mahafantatra an'i Trujillo, farafaharatsiny ivon'io manan-tantara io, ary avy eo vao manao kilometatra 13 fotsiny mankany Huanchaco. Ity volana ity dia iray amin'ireo mafana indrindra amin'ny taona satria ny faritany atsimo dia miaina fahavaratra nefa mbola matetika ny mari-pana dia tsy ambony noho ny 30 ºC. Mazava ho azy, ny hamandoana, eo amoron'ny ranomasina, dia avo foana.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Huanchaco
Ny toerana tonga dia Trujillo, tanàna lehibe indrindra ao amin'ny faritra. Afaka tonga eto ianao amin'ny seranam-piaramanidina ary avy eo maka bisy na minivan hanatevin-daharana ireo teboka roa ireo. Trujillo dia eo amin'ny 560 kilometatra miala an'i Lima ka azonao atao ihany koa ny mandray ity dia kely amin'ny fiaramanidina ity. Ny safidy mora indrindra dia ny fiara fitateram-bahoaka fa adiny iraika ambin'ny folo ora.
Ireo mpandeha backpack matetika tsy mandray fiaramanidina betsaka ka ny fomba fitaterana mahazatra indrindra dia ny fiara fitateram-bahoaka hivezivezy etsy sy eroa. Raha mila fahaleovan-tena ianao dia ataonao ny fitsidihana, raha tsy izany i Peru dia mpizaha tany fatratra Tsy sarotra ny mahita fitsidihana efa voalamina amin'ny iray amin'ireo masoivoho marobe misy.
Ny namako dia faly niaraka tamin'i Huanchacho ary teo anelanelan'ny Novambra sy Desambra izy, na dia nilaza aza izy ireo fa ny vanim-potoana tsara indrindra noho ny toetr'andro sy ny fanjakan'ny ranomasina dia eo anelanelan'ny Desambra sy martsa. Amin'ny ririnina dia betsaka ny rivotra fa mitondra rahona betsaka kokoa, na dia tsy mampatahotra ny surf aza izany.
Inona no hatao any Huanchaco
Toa miharihary izany nefa ity milalao onja. Raha fantatrao, tsara. Raha tsy izany dia afaka miditra an-tsekoly ianao ary miala voly. Tsy haiko raha afaka roa andro dia hianatra zavatra ianao fa hanao sakaiza sy hihomehy be. Misy magazay maro izay mampianatra sy manofa fitaovana sy tabilao.
Fa ankoatry ny fitetezana onja-surf, Huanchacho dia manana manintona sasantsasany izay tsy maintsy tsidihinao. Nandritra ny fotoanan'ny fanjanahana Espaniôla dia seranan-tsambo tena lehibe izy io saingy tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia nanokatra ny seranan-tsambon'i Salaberina vaovao izy ary nanjary lany andro. Izy izay dia tamin'ny 1891 dia nisy seranana 108 metatra lava be namboarina Soa ihany fa mbola mijoro ary tsy misy te ho very.
Eo amin'ny tanibe dia misy kianja kely eo amoron'ny morontsiraka, izay tery mandra-pahatonga azy hamorona ilay seranana izay miditra tsikelikely ao anaty rano. Amin'ny faran'ny metatra an-jatony dia misy boribory roa misy sehatra amin'ny ilany ankavanana, somary ambany kely noho ny firafitra lehibe. Mandehandeha etsy sy eroa mijery ny ranomasina, ny Surf, ny tanàna ao aorianao ary ny masoandro dia mahafinaritra.
Any amin'ny morontsirak'i Huanchaco dia misy fivarotana sakafo sy trano fisakafoanana maro izay tena tompon'ny trondro sy hazan-dranomasina.. Raha te hanandrana sy hanandrana tsara ianao ceviche toerana tsara ity. Ny sabotsy sy alahady dia vao maika miha tsara satria misy bara ary maro ny mpizahatany vahiny tonga. Volana karnavaly ny volana febroary, fotoana iray hafa tsara sy maro loko hitsidihana.
Huancacho dia fantatra amin'ny "Caballitos de totora", rakitry ny nentin-drazana an'ny faritra izay vita amin'ny ravina sy taho totora, zavamaniry. Ireo rafts ireo dia namboarin'ny olona teo an-toerana nandritra ny roa na telo arivo taona ary lasa sambon'ny sambo mpanjono Peroviana nanomboka teo. Miorina sy tery ny lakaly ary mety hahatratra dimy metatra ny halavany. Ny vita tsara dia afaka mitondra lanja hatramin'ny 200 kilao.
Ankoatra ny jono, ny asany tany am-boalohany, eto Huanchaco koa Natao hialana voly ao anaty ranomasina izy ireo, onja mandehandeha ary mitaingina onja, toy ny nanao fanazaran-tena tamin'ireto soavaly volotara ireto. Mahita azy ireo mandrakariva ianao, mihombo amin'ny hazo mihitsoka amin'ny fasika ary raha manontany ianao dia afaka miaina mivezivezy amin'ny iray amin'ny rano Pasifika.
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Tempolin'ny virijin'ny fanampiana tsy tapaka, miorina eo an-tampon'ny havoana, miaraka amina virijina ao anatiny izay fanomezana avy amin'i Carlos V, vita tao Seville ary miaraka amin'ny endrik'ilay renin'i Juana la Loca ho maodely. Tonga teto izy tamin'ny 1537.
Fitsangatsanganana avy any Huanchaco
Tany feno harena be i Peroa ka amin'izay misy anao dia manana bebe kokoa ny mahita sy mahafantatra. Kilometatra vitsivitsy miala an'i Huanchaco no Rava i Chan Chan, ohatra, natsangan'ny kolontsaina Chimu izay talohan'ny kolontsaina Inca. Tombanana fa amin'ny fotoana mety indrindra dia olona manodidina ny 60 no nonina teto, ka tanàna nisy ny litera rehetra tao. Hatramin'ny 1986 dia Lova manerantany ary androany izy ireo dia azo entina amin'ny alàlan'ny tamba-jotra izay mitondra antsika hanakaiky kokoa ny ampahan'ny sivy citadels mandrafitra io toerana io.
Chan Chan, inoana, Niorina tamin'ny 1300 taona talohan'i Kristy talohan'izay ary manaitra ireo rava firafitra adobe feno fanamaivanana miaraka amina endrika geometrika, fanehoana ny vorona sy ny trondro. Androany izy ireo dia mandrafitra toerana arkeolojika misy citadels marobe hita eo am-bavan'ny Lohasahan'i Moche ary izy io no renivohitry ny fanjakan'ny Chimor talohan'ny nampidirin'ny Incas azy tao amin'ny fanjakan'izy ireo nitombo. Ny rano teto dia avy any Andes ka ny dian'ireo rano sy ny fibaikoana azy dia natao noho ny a rafitra fanondrahana mahaliana mbola hita io anio.
Ny Incas aloha ary avy eo ny Espaniola, miaraka amin'ny sabatr'i Pizarro, dia nahatonga ny kolotsaina sy ny tanàna handeha ho any amin'ny toerana farany lavitra indrindra amin'ny tantara, tsy hoe tsy nandroba fasana izay nanary harena tena izy tamin'ny zavatra volamena. Ireo fikarohana izay ahafahantsika mahafantatra azy ankehitriny dia nanomboka tamin'ny taona 60 tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ireo bisy miainga avy any Huanchaco dia mamela anao eto tsy misy olana ary izy rehetra dia niala tamin'ny arabe lehibe akaikin'ny morontsiraka.
Misy tranombakoka koa. Ny fidirana amin'ny tranokala lehibe sy ny tranombakoka dia mitentina eo amin'ny 3 euro ary mamela anao hahita ireo rava sy tranokala roa hafa. Misy koa ny mpitari-dalana, fa tsy maintsy tendrenao izy ireo raha mila ny fanampiany. Ireo fahasimbana ireo dia hita avy any Huanchaco sy avy any Trujillo. Sisan-javatra rava mahaliana hafa ny an'ny Huacas del Sol y Luna, zato taona maro talohan'ireo sisa tavela tamin'i Chan Chan. Izy ireo dia rava Moche ary tsara kokoa ny manampy ny mpanoro lalana hahatakatra ny zava-drehetra ary tsy hamela na inona na inona amin'ny fantsona.
Hatsaran-tarehy ny mozika, voatahiry tsara satria tany ambanin'ny tany sy fasika nandritra ny taonjato maro izy ireo. Inona no loko! Tonga amin'ny bus / bus avy any Huanchacho mankany Trujillo ianao. Eto ianao dia miainga ao amin'ny Plaza de Almas ary mandeha amin'ny làlana Huayna Cuapac mandritra ny folo minitra mankany Avenida Los Incas. Bisy marobe no mandalo ity làlana ity ary ireo izay mankany amin'ny Las Huacas del Sol y Luna dia mandalo. Ny dia maharitra 20 minitra ary mamela anao eo am-baravarana. Manodidina ny 3 Euros isaky ny olona ny fidirana ary misy mpitari-dalana satria tsy misy afa-tsy mpitari-dalana no rakotra azy. Misy tranombakoka izay aloa isan-karazany.
Trujillo io tenany io, araka ny nolazaiko tetsy ambony, dia fitsangatsanganana iray hafa mety hitranga avy amin'ilay spaoro resahintsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Fialantsasatra any Huanchaco, amorontsirak'i Peroa